बागमती प्रदेशले गत चैतमा आह्वान गरेको बिजुली बस खरिद सम्बन्धिको बोलपत्र रद्द गरी पुन आह्वान गर्दै
सौर्य परियोजनाको पीपीए अब प्रतिस्पर्धाबाट!
वितरण तर्फको विद्युत चुहावट ९.१० प्रतिशतमा झर्यो, सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा!
बूढीगण्डकी मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने सरकारको निर्णय!
हिउ नपग्लिएर मध्यमस्र्याङ्दीमा विद्युत् उत्पादन घट्यो!
प्रकाशित मिति : सोम, असोज १८, २०७८
काठमाडौंं, असोज । बागमती प्रदेश सरकारले गत चैत १८ गते आह्वान गरेको विद्युतीय बस खरिदका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । बस खरिदका लागि अध्ययन गरी तयार परेको लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेकोले सो बोलपत्र रद्द गरी पुन बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको हो ।
प्रादेशिक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डमार्फत सरकारले सो बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको छ ।
बोर्डका निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाका अनुसार मन्त्रालयले बस खरिदका लागि अध्ययन गरी तयार परेको लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेकाले सो बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार लागत अनुमानभन्दा २९ दशमलव ८३ प्रतिशत बढीको प्रस्ताव बोलपत्रदाताले पेस गरेका छन् । त्यसैले बोलपत्र निष्कासनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्पन्न गरी दसैँ अगाडि नै बोलपत्र आह्वान गर्न मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ ।
पहिले नै आह्वान गरिएको लागत मूल्यमा ३० विद्युतीय बस र १५ चार्जर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने छ ।
बस सञ्चालनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । बोर्डले काठमाडौंको गोङ्गबु बसपार्क, हेटौंडा बसपार्क, भरतपुरको पारस बसपार्क, धादिङको गजुरी, काभ्रेको धुलिखेल र नुवाकोटको बट्टार तथा विदुर बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जानकी केबुललाई पुनः उत्पादनको अनुमति
काठमाण्डौ, माघ । नेपाल गुणस्तर तथा 23 hours ago
बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन जोडियो